13 / 05 / 2021 13 / 05 / 2021 ခရစ် Wharfe 1349 Views စာ0မှတ်ချက် 76192 Avengers: နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ, Avengers, Avengers: Ultron ၏ခေတ်, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Avengers: The Infinity Saga, Black က Panther, Infinity Saga, သံမဏိလူသား, Lego, Lego Marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, Thanos
ဒီနွေရာသီပါပဲ Lego Marvel အစုံအတွက်ကာလကြာရှည်အမှားတညျ့ပါပြီ Lego နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်မြောက်သော Thanos bigfig ကိုပေးပြီးစူပါဟီးရိုး Pantheon ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ superillain သည်သူ၏ယခင်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအတွက်သံခမောက်လုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Lego Marvel Cinematic Universe သည်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်သူ၏ရွှေရောင် headpiece ကိုသူ၏ခရမ်းရောင်အမိုးခုံးကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဝတ်ဆင်ရန်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းရှိသော်လည်းပြသခဲ့သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အသစ် - ထုတ်ဖော် 76192 Avengers: နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ နောက်ဆုံးတွင် Thanos bigfig အသစ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းကိုပိုမိုတိကျမှန်ကန်စေရန်အတွက်သံခမောက်ကိုလဲလှယ်ခဲ့သည်။ Lego - အလွန်သေးငယ်သောအသေးစားခေါင်း၊ ဒီထက်ကောင်းတာတောင်ဒီခေါင်းဟာတကယ်လည်ပတ်နေပုံရတယ်။
Thanos အသစ်သည်ယခင်ပုံသဏ္'sာန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပခုံးသံချပ်ကာကိုကျောခိုင်း။ ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်စင်သို့တိုက်ရိုက်ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ ယခု Avengers: Endgame ၏နောက်ဆုံးဇာတ်သိမ်းအတွက် ပို၍ စစ်မှန်သောဒီဇိုင်းကိုရရှိသည်။ ဒါကဇာတ်ကောင်တစ်ခုဖန်တီးရတာ၏လှပမှုပါ Lego ရုပ်ရှင်ပြီးတာနဲ့ဖန်သားပြင်တွေကိုထိမှန်ပြီးသားဖြစ်ပေမယ့်ဒါကဇိမ်ခံကားတော့မဟုတ်ပါဘူး Marvel လိုင်းယခုတိုင်အောင်ရရှိခဲ့သည်။
သို့သော်ယခုနွေရာသီ Infinity Saga အစုံအလင်ဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး၎င်းတို့အကြားအနည်းဆုံးရုပ်ရှင်လေးကားကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ Marvel Cinematic Universe: Iron Man၊ Black Panther, Avengers: Age of Ultron နှင့် Avengers: Endgame ။ ယခုအချိန်အထိထုတ်ဖော်ပြသထားသည့်ငါးစုံစလုံး၏ပုံများကိုသင်စစ်ဆေးနိုင်သည် ဒီနေရာမှာကိုနှိပ်ခြင်း.
← LEGO VIDIYO 43114 Punk Pirate သင်္ဘောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
LEGO လား Marvel 76191 Infinity Gauntlet အတွက်စံချိန်တင်အသစ်တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ရန် LEGO Group? →